Sarkaalka Barnaamijka Sare ee Caalamiga ah
Soo Koobida Mawqifka
Machadka McKnight wuxuu raadiyaa Sarkaalka Barnaamijka Waayeelka ah ee khibrad u leh barnaamijkiisa Caalamiga ah. Doorkani wuxuu diiradda saari doonaa isku xirka aragtida barnaamijka istiraatiijiga ah, gaar ahaan iskaashiga iyo cilmi-baarista biophysical-ka, ee qaabeynta iyo hirgelinta nidaamyo iyo habab wax ku ool ah. Sarkaalka Barnaamijka Sare wuxuu gacan ka geysan doonaa qiimeynta awoodda deeq-bixiyeyaasha ee guusha iyo ku habboon shuruudaha maalgelinta, oo ay ku jiraan qoraalka fikradda, dib-u-eegista soo-jeedinta, iyo hababka warbixinta. Furaha doorkan wuxuu noqon doonaa maaraynta iyo joogteynta xiriir shaqo oo wax ku ool ah lala yeesho la-taliyeyaasha, deeq-bixiyeyaasha, daneeyayaasha muhiimka ah, iyo xubnaha kale ee shaqaalaha aasaasiga ah.
Sarkaalka Barnaamijka Sare ee Caalamiga ah wuxuu u warbixin doonaa Agaasimaha Barnaamijka CCRP.
Masuuliyadaha Muhiimka ah
Ku soo bandhig khibrad deeq-lacageedka aagga barnaamijka caalamiga ah
Maamul faylalka tacliinta sare ee deeqaha la xiriira cilmi-baarista cimilada iyo hal-abuurnimada deegaanka, iyadoo lala kaashanayo kooxda taageerada adduunka si loo hormariyo mudnaanta barnaamijka oo dhan.
La shaqee Agaasimaha Barnaamijka iyo kooxda caalamiga ah si loo hubiyo in la waafajiyo mashaariicda deeqaha iyadoo la adeegsanayo himilada iyo mudnaanta barnaamijka ay dejiyeen guddiga aasaasiga ee McKnight.
In la iska kaashado dib u eegista qoraallada fikradaha, codsiyada deeqaha, talooyinka ugu dambeeya, iyo warbixinnada deeqaha ah iyo in la hubiyo taxaddar ku habboon oo ku saabsan jagooyinka gobollada iyo iskutallaabta. U dhaqso sida hogaaminta deeqaha iskutallaabta ee ku hoos dhaca khibradda maadada.
Dib-u-eegis ku samee oo ansixiso bixinta deeqaha.
Kaqeybqaado maamulka deeqaha adoo diyaarinaya oo ka baaraandegaya dukumiintiyada la xiriira deeqaha iyo waraaqaha ku socda qaab jaan go'an.
U diyaari dukumiintiyada istiraatiijiyadda la xiriira deeqda iyo barnaamijyada kulammada guddiga saddexdii biloodba mar.
Ku darso barnaamijka qiimeynta / wareegyada barashada. Tilmaamaha horumarinta istaraatiijiyada barashada ee laxiriira khibrada maadada.
Habdhaqanka tusaalaha ah ee hubiya mabaadi'da deeq-bixinta iyo ku dhaqanka barnaamijyada oo la jaan qaadaya qiyamka aasaasiga iyo mabaadi'da hawlgalka.
Hawlgallada iyo isgaarsiinta
Iyadoo loo marayo wadashaqeyn dhow Agaasimaha Barnaamijka iyo kooxaha lataliyaha, maaree nidaamyada kala duwan ee xog ururinta iyo keydinta iyo gacan ka geysashada isku dubaridka adeegsiga xogta iyo macluumaadka barashada iyo saameynta lagu kalsoonaan karo (barnaamijyada la wadaago iyo ka qeyb qaadashada, bogga internetka, maareynta dukumintiyada, abaabulka, wadaagista, iyo marin u helka isticmaalaha) ).
Maareynta iyo hogaaminta horumarka iyo fulinta istiraatiijiyadda iyo isgaarsiinta barnaamijka isgaarsiinta, oo ay ku jiraan qorsheynta; la shaqeynta lataliyayaasha isgaarsiinta, waratada, iyo kooxda isgaarsiinta ee McKnight; isku-duwidda marinnada isgaarsiinta; iyo kala shaandheynta iyo cusbooneysiinta waxyaabaha ku jira shabakadda.
Markii aan la tashaday Agaasimaha Barnaamijka, qandaraaska iyo maaraynta la taliyayaasha si loo gaaro himilooyinka barnaamijka ee la xiriira deeq-bixinta, cilmi-baarista, daabacaadda, dib-u-eegista, iyo qiimeynta.
Xiriirinta kobcinta iyo kobcinta kooxda lataliyaha adduunka iyo daneeyayaasha muhiimka ah ee gudaha iyo dibaddaba
Horumarinta iyo joogteynta xiriirka kooxda lataliyaha caalamiga ah, deeq bixiyeyaasha jira, iyo rajooyinka cusub ee wax looga barto shaqada hadda jirta, sahaminta fursadaha soo ifbaxaya, iyo xalinta dhibaatooyinka iyo dhisida fikradaha cusub.
Kordhi xiriir wada shaqeyn ah kuwa aan macaash doonka ahayn, siyaasad dejiyeyaasha, maalgeliyeyaasha, shabakadaha, iyo kooxaha kale ee ka shaqeeya arrimaha la midka ah.
Kordhi oo ilaali cilaaqaadka wanaagsan ee deeq bixiyaasha.
Maareyn iyo abaabul shirar, shirar, iyo waxqabadyo bulsheed oo ku saabsan aagagga gobolka iyo barnaamijka xiisaha iyo muhiimadda.
Kaqeybgal oo kaqeybgal shirarka barnaamijyada laxiriira, booqashooyinka goobta, iyo shirarka, oo ay kujirto safarada caalamiga ah sida lagu dabaqi karo.
Kaqeybgal barashada guud ee isku-dhafan ee aasaasiga ah, shirarka, iyo dhacdooyinka
Ka qaybgal oo si firfircoon uga qaybgal dhammaan barnaamijyada waxbariddooda kooxeed iyo dhammaan shirarka shaqaalaha, iyo sidoo kale dib u gurasho.
Kaqeybgal kooxaha iskudhafan ee iskudhafyada shaqada ah sida ugu haboon.
Taageer dadaalka aasaaska ee kala duwanaanta, sinaanta, iyo ka mid noqoshada.
Xirfadaha Muhiimka ah
Dhammaan hoggaamiyeyaasha McKnight waxaa laga filayaa inay soo bandhigaan astaamaha soo socda:
Maskax istiraatiiji ah
Isgaarsiin wax ku ool ah
Waxay kalsooni gelisaa
Natiijooyinka ayuu wadaa
Waxay maamushaa kakanaanta
Waxay dhistaa shabakado
Wada shaqeyn wax ku ool ah
Shuruudaha Muhiimka ah
Aqoonta u gaarka ah jagada waxaa ka mid ah:
Waxay hubisaa isla xisaabtanka
Qorshayaasha iyo isku toosinta
La qabsiga xaalada
Waxay dhistaa kooxo wax ku ool ah
Aqoonta iyo Khibradda Ugu Yar
Shakhsiyaadka haysta shahaadada PHD ama isku mid ah khibrad / waxbarasho. Uguyaraan 5-7 sano oo cilmi baaris ah oo ku saabsan cilmiga byofisiga oo leh iskudhafid edbin iyo bey'adeed. Khibrad ka shaqaynta duruufaha caalamiga ah iyo / ama horumarka bulshada. Khibrad hore ee mabaadi'da agroecological iyo habab.
Aqoonta, Xirfadaha, iyo Kartida
Awood u leh inuu si wax ku ool ah ula shaqeeyo iskutallaabta, iskudhafka qaybaha, iyo iskaashiga dhaqamada kala duwan.
Awood u leh inuu si iskaashi iyo ixtiraam leh ula shaqeeyo dad iyo kooxo kala duwan, gaar ahaan kuwa aan macaash doonka ahayn, ururada aan dawliga ahayn, ururada qaybaha gaarka loo leeyahay, machadyada cilmi baarista iyo jaamacadaha, iyo bulshada reer miyiga ah.
Fahamka mudnaanta iyo awoodda loo haysto maalgeliye iyo awoodda lagu yareyn karo dhaqdhaqaaqaas isla markaana lagu abuuri karo xiriirro aamin ah dhammaan khadadka farqiga u dhexeeya.
Awood u leh horumarinta iyo maaraynta geeddi-socodka iyo ku-dhaqanka nidaamyada urura ee isku-dhafan.
Awood u leh falanqaynta, su'aasha, iyo aqoonsiga arrimaha muhiimka ah iyo adeegsiga xogta si loo taageero gabagabada.
Awood u lahaanshaha aragtida arrimaha iyo caqabadaha ka imanaya dhinacyada kala duwan iyo adeegsiga tamarta caqliga iyo hal-abuurka.
Xiriir xoog leh, soo bandhigid, iyo xirfadaha maaraynta mashruuca.
Awood u lahaanshaha dadka kale iyo saameynta natiijooyinka.
Awood u leh inuu la shaqeeyo nidaamyo iyo habab faahfaahsan.
Xirfad u leh sameynta iyo maareynta miisaaniyadaha iyo warbixinta maaliyadeed.
Aqoonta maamulka iyo howlaha ururada aan macaash doonka ahayn.
Aqoonta dhaqamada deeqaha caalamiga ah iyo shuruudaha.
Awood u leh inuu maareeyo culeys shaqo oo culus isla markaana la kulmo waqtiyada loo qabtay.
Aqoonta arrimaha khuseeya barnaamijka Caalamiga ah iyo rabitaanka wax barashada.
Awood u leh inuu si wax ku ool ah ugula xiriiro hadal ahaan iyo qoraal ahaan Ingiriis iyo mid Faransiis ama Isbaanish ah ayaa la door bidaa
Xaaladaha Shaqada iyo Dadaalka Jirka
Shaqada waxaa lagu qabtaa goobo kala duwan, oo ay ku jiraan safarka qaranka iyo kan caalamiga ah ilaa boqolkiiba 20 waqtiga. Safarka caalamiga ahi wuxuu socon karaa laba toddobaad safar kasta iyo guud ahaan dalalka leh kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha ku yar.
Hawlgal joogto ah ee mashiinnada xafiiska caadiga ah (kombiyuutarka, koobiyeynta, iyo fakiska) ayaa loo baahan yahay.
Kulamo iyo dhacdooyin fiidkii mararka qaarkood ayaa loo baahan yahay.
Shakhsiyaadka waa inay awoodaan inay muujiyaan inay sharci ahaan xaq u leeyihiin inay ka shaqeeyaan Mareykanka.
Magdhawga iyo Faa'iidooyinka
Machadka McKnight Foundation wuxuu bixiyaa xirmo magdhow tartan ah. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah caafimaadka, ilkaha, nolosha, iyo caymiska naafada; fasax lacag la'aan ah; ku biirinta qorshaha hawlgabka; u dhigma barnaamijka hadiyadaha sadaqada; iyo jawi shaqo oo dabacsan. Fursadani waa shaqo waqti-buuxa ah, oo ka-dhaafitaan kuna saleysan Minneapolis. Mushaharku waa $138,600-1-$146,700.
Bayaanka kor ku xusan waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo qaab guud oo ah waxa booskani u baahan yahay. Waxaa jiri kara howlo kale iyo aqoonsiyo ka soo bixi kara waqtiga, iyo qofka la doortay waxaa la weydiisan karaa inuu qabto waajibaadka kale ee aan halkan lagu xusin.
Maktabadda McKnight waa shaqo-bixiye loo siman yahay iyo qiimeyn kala duwanaansho kala duwan. Waxaan ku dhiirrigelineynaa musharixiinta dhammaan asalka si ay u codsadaan.
Si aad u Codsato
Fadlan soo gudbi resumeygaaga iyo warqad dabool ah oo muujinaya dareenkaaga booska iyo ku habboon doorka Xariirka Musharaxnimada ee Wanaagsan. Waraaqaha waxaa loo gudbin karaa Sarah Meyer.
Baadhitaankan waxaa lagu fulinayaa iyadoo laga caawinayo koox ka socota Muwaadin wanaagsan.
Jagada waxay xiri doontaa codsadeyaasha Jimcaha, Abriil 9 markay tahay 5 galabnimo waqtiga maalinta dhexe.
Sarah Meyer, Madaxweyne ku xigeenka
Mollie Smith, Raadiyaha Associate
Xidhan: Abriil 9, 2021
Codsadeyaasha waxaa loo kaxeyn doonaa Xariirka Musharaxiinta Muwaadin Wanaagsan si ay u soo gudbiyaan resumeyntooda iyo warqada daboolka ah. Waraaqaha waxaa loo gudbin karaa Sarah Meyer.
Mawqifku wuxuu xirmayaa 5:00 pm Waqtiga Dhexe.